window7နှင့်xpနှစ်ခုတင်ချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
March 2012 edited March 2012 in Windows 7
ကျွန်တော်ကxpသုံးတာပါ .ကျွန်တော်ဝင်းဒိုးမတင်တတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့xp မှာ
Partition ထပ်ခွဲပြီးတင်မှာပါ။အစမ်းပေါ့လုပ်တတ်အောင်ပါ..ကျွန်တော်local dis(f)တခုထပ်ခွဲထားပါတယ်
ကိုဘယ်မှဒေါင်းရမှာလဲခင်ဗျ။ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါနော်...ကျွန်တော့်စက်က32 bit ပါ..window 7Ultimate တွေ့ပါတယ်လင့်တွေသေနေတယ်
window7အခွေက software ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာသွား၀ယ်လိုက်ပါ..
800 , 1000 လောက်ပဲပေးရတာပါ...
အစ်ကို နက်ကနေဒေါင်းရင် 8000, 10000 လောက်ကုန်သွားလိမ့်မယ်..
သူ့ file size က3GB၀န်းကျင်လောက်ပါတယ်...
window7နဲ့ XPတွဲတင်ထားလို့ရပါတယ်...
window7တင်တဲ့အခါမှာ XPပါတဲ့ partition ကို format မချရင်၇ပါပီ
window7 တင်ပြီးသွားလို့ restart လုပ်လိုက်ရင် window မှာရွေးစရာ ၂ခုပေါနေပါလိမ့်မယ်
အသေးစိတ်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ အပေါ်က ဆရာသမားတွေပြောတာမှန်သကော.. အနှစ်ချုပ်လေး ထပ်ပြောပါ့မယ်။ အိုအစ်စ် ၂ခုတင်ချင်ရင် အရင်ဆုံးထွက်တာကိုအရင်တင်ပါ။ နောက်ထွက်တာ နောက်မှတင်ပါ။ XP ပြီးရင် Vista . Vista ပြီးရင် 7. 7ပြီးရင် 8 ဆိုတော့ကား တင်ချင်တာတင်ကျပါသကော..